Pombi pomhu - Kurumidza uye nyore mazano ekushongedza imba yako | Bezzia
Susana godoy | 12/05/2021 16:00 | Zviite iwe pachako
Iwe unoda kugadzira mamakom pom pom? Ipapo haugone kupotsa mazano atinokuunzira. Nekuti iwe unozogona kuzviita nenzira yakapfava, nekukurumidza uye zvakare, nemhando dzakasiyana. Ehezve, icho chinhu chatisingafanire kupotsa nekuti kana changogadzirwa, zvinoshandiswa kune zvakawanda zvekushongedza.
Pom pom yakagara iri imwe yeanonyanya kuzivikanwa ruzivo uye izvo komesa marudzi ese emicheka kana zvigadzirwa. Kubva pakugadzira rugi navo, kuve chikamu chezvishongedzo uye kunyange fashoni. Kana iwe uchida kuzadza imba yako navo, saka ino ndiyo nguva. Takatanga!
1 Maitiro ekugadzira makom pom pom neforogo
2 Pombi pombi nemakadhibhokisi
3 Maitiro ekugadzira pom pom rug
Maitiro ekugadzira makom pom pom neforogo
Dzimwe nguva tinofunga kuti hunyanzvi hunogona kuve hwakaomarara. Asi Nebhora remvere, vara raunofarira, uye forogo isu tichava nezvinhu zvakagadzirwa kutanga kugadzira pombi yedu. Ehezve, mune ino kesi ivo vachabuda vari vadiki, saka ivo vanozove akakwana pakushongedza zvishongedzo kana yako yaunofarira hembe.
Kutanga, isu tinofanirwa kuenda tichimonyanisa makushe, munzvimbo yepakati yemeno eforogo. Kunze kwemakumbo atinoita, iwo mukobvu mhedzisiro yedu ichave. Paunenge uchitova nemari yaunoda, cheka shinda yemvere uye ikozvino uchafanirwa kuve nepfundo zvese chikamu chekutanga chejira uye chikamu chekupedzisira, kuchigadzirisa zvakanaka. Iye zvino tinotora chidimbu chitsva chekuchisunga zvakasimba muchikamu chepakati chepompu yedu kuti chibvise kubva paforogo. Iye zvino isu tinongofanirwa kucheka mativi. Tichavaumbiridza kuitira kuti pom pom yedu igare iine kupera. Wakangwara!
Pombi pombi nemakadhibhokisi
Kana forogo isingakugutsi uye iwe unoda pombi diki rakakura pombi ipapo iwe zvakare uine mukana wekushandisa kadhibhodhi. Hongu, ndeimwe yemafungiro makuru ayo asingatore iwe nguva yakawanda futi. Mune ino kesi, isu tinoda zvidimbu zviviri zvemakona emakadhibhokisi. Pamativi ese maviri, isu tichagadzira ka slot kadiki katinozocheka nekasi. Iye zvino tinofanira kuisa rimwe kadhibhodhi pane rimwe uye titange kuputira shinda pamusoro pavo, kutanga kubva kune imwe slot uye kuchipfuura nepiri chechipiri. Nhanho inotevera ndeye kutenderera makushe kusvikira aine hukobvu hwakanaka, sezvo sekuziva kwako, izvi zvinotarisisa kuti pom pom iri fluffier. Paunenge uinayo, unofanirwa kugadzirisa mhedzisiro neshinda kune rimwe divi uye kune rimwe, cheka rutivi rwayo nekasi. Iwe unogona kunyange kusanganisa mavara ane mavara!
Maitiro ekugadzira pom pom rug
Zvino zvataona maitiro ekugadzira pombi, tinoda ivo kuti vave chikamu chekushongedza. Naizvozvo, imwe yemafungiro makuru anogara achikunda iri Gadzira Pom Pom Rug. Icho chiri nyore chaizvo uye chokwadika, chinokusiira iwe chidimbu chakakosha pamwe nekukwana. Kune rimwe ruoko iwe unogona kuwana mesh base uye nekudaro, sunga iyo pomponi kwairi. Chinhu chinoshanda nemazvo sezvo makomichi emapom pombi akasungirirwa zvakanaka. Asi kune rimwe divi, iwe unogona kugara uchibheja kugadzira kapeti yako netambo, uchimonyoroka kuti uite hwaro uye nekuisa glue zvishoma kuti irege kudonha.
Paunenge uinayo, inguva yekunamirawo pomponi pane kapeti. Ehe, iyo nguva inogona kukutora iwe nguva shoma, asi chokwadika, mhedzisiro yacho yakakosha kwazvo. Izvo zvakanakisa kubheja pamubatanidzwa wepombi pombi, kune yakawanda yekugadzira uye yakanaka mhedzisiro. Ehe iwe unogona zvakare kusanganisira pom poms yeiyo saizi uye hombe kupedzisa pamberi, kana kusanganisa akasiyana masize. Izvo zvinogara zviri mukuda kwako, nekuti mune mbiri zviitiko zvichave zvakakwana. Kana iwe uchizvifarira, usarasikirwa nemukana wekubheja pane zano rakadai. Tiudze kuti zvakazoitika sei!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Zviite iwe pachako » Wool Pom Poms: Nyore Kushongedza Pfungwa